येशूले शिक्षा दिनुहुन्छ कि प्राणले हामीलाई द्धिजको सामु लैजान्छ - सत्य वेद पुुस्तकहरू
07/10/2020 26/10/2020 Ragnar
द्धिजको अर्थ ( ‘दुई पटक जन्मनु’ वा ‘फेरी जन्मनु’ ) हो । यो विचारमा आधारित छ कि कुनै एक व्यक्ति पहिला शारीरिक रुपमा जन्मन्छ र पछि दोस्रो पटक आध्यात्मिक रुपमा जन्मन्छ । यो आध्यात्मिक जन्म परम्परागत रुपमा पवित्र धागो ( यज्ञोपवित ,उपावित वा जनै) लगाउँदा उपनयन समारोहको समयमा हुने प्रतीक हो । यद्यपि बौधायन गृहृासुत्र जस्ता प्राचीन वैदिक ( १५०० — ६०० ईसा पुर्व ) ग्रंथहरुले उपनयनको बारेमा र्चचा गरे पनि अन्य कुनै प्रचीन ग्रंथहरुले द्धिजको उल्लेख गरेको पाइदैन । विकिपेडियाले यसरी वर्णन गर्छ ।
यसको बढ्दो उल्लेख मध्यम देखि पहिलो सहस्राब्दीका धर्मशास्त्रहरुको मुलपाठमा देखिन्छ ।
द्धिज शब्दको उपस्थिति एउटा चिन्ह हो कि मुलपाठ सम्भवत : भारतको मध्ययुगीन काल को मुलपाठ हो ।
यद्यपि द्धिज आज एक ज्ञात अवधारणा हो , यो अपेक्षाकृत नयाँ हो । द्धिज कहाँबाट आयो ।
थोमा द्धारा येशू र द्धिज
द्धिजको बारेमा कोहि पनि व्यक्ति द्धारा दिइएको प्रारम्भिक शिक्षा येशुको हो । यहुन्नाको सुसमाचार ( इृस्वी संवत् ५०—१०० मा लेखिएको ) मा येशूले द्धिजको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ ।यो भनिन्छ कि इृस्वी संवत् ५२ मा मालाबारको तटमा र त्यसपछि चेन्नईमा पहिलो पटक भारतमा येशूका चेला थोमाले येशूको जीवन र शिक्षाको प्रत्यक्ष गवाह भएर द्धिजको अवधारणा ल्याए र भारतीय विचार र व्यवहारमा परिचित गरे । थोमाको येशूको शिक्षाहरुको साथ भारतमा आगमन भारतीय ग्रंथहरुमा द्धिजको उदयसँग मिल्छ ।
प्राणको माध्यमबाट येशू र द्धिज
येशूले द्धिजलाई, उपनयनसंग होइन, तर प्राण , अर्को प्राचीन अवधारणा सँग जोड्नुभयो । प्राणले सास , आत्मा , हावा वा जीवन शक्तिलाई व्यक्त गर्छ । प्राणको सबैभन्दा पहिलो संन्र्दभ ३००० बर्ष पुरानो चन्दयोग्य उपनिषद हो , तर धेरै अन्य उपनिषदहरुले यस अवधारणाको उपयोग गर्दछन् जस्मा कथा , मुण्डक र प्रसनी उपनिषदहरु पर्दछन् । विभिन्न ग्रन्थहरुले वैकल्पिक विवरणहरु दिन्छन् , तर प्राणले हाम्रो सास÷सास फेर्न खोज्ने सबै यौगिक प्रविधिहरुमा प्राणायाम र आयुर्वेद लाई रेखांकित गर्दछ । प्राणलाई कहिलेकाहि आर्यु (हावा ) प्राणको रुप , अपान , उदान , समान र व्यान को रुपमा वर्गीकृत गरिन्छ ।
यहाँ द्धिजको परिचय दिदै येशूको बार्तालाभ यसरी छ । ( रेखांकित शब्दहरुले द्धिजा वा दोस्रो जन्मको सन्दर्भलाई जनाउँदछ , जबकि मोटो अक्षरले प्राण , वा हावा , आत्मा शब्दहरुलाई )
१. फरिसीहरूमधये निकोदेमस नाउँ भएका एक जना मानिस थिए। तिनी यहूदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। २.यिनी राती येशूकहाँ आए, र उहाँलाई भने, “गुरुज्यू, हामी जान्दछौं तपाईं परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनुभएन भने तपाईंले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन।” ३.येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन।” ४. निकोदेमसले उहाँलाई भने, “मानिस बूढ़ो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ?” ५.येशूले जवाफ दिनुभयो, “साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। ६.शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। ७.मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान। ८.बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ, त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ।” ९.निकोदेमसले उहाँलाई सोधे, “यो कसरी हुन सक्दछ?” १०.येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “तिमी इस्राएलका गुरु हौ, र पनि यी कुरा बुझ्दैनौ? ११. साँच्चै, म तिमीलाई भन्दछु, हामी जे जान्दछौं त्यो भन्दछौं, र हामीले जे देखेका छौं त्यसको गवाही दिन्छौं, तर तिमीहरू हाम्रो गवाही स्वीकार गर्दैनौ। १२.मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुरा भनें, र पनि तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, त तिमीहरूलाई स्वर्गका कुरा बताएँ भने कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? १३.स्वर्गबाट ओर्लिआउने मानिसको पुत्रबाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। १४.जसरी मोशाले उजाड-स्थानमा साँपलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ, १५. र जस-जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। “१६.किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्lवास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्‌। १७. किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो। १८. जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ, त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्नेचाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। १९. फैसलाचाहिँ यही हो: ज्योति संसारमा आएको छ, र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। २०.किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ, र ज्योतिमा आउँदैन, नत्रता त्यसका काम प्रकट हुनेछन्‌। २१.सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ, र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भन्ने प्रस्टै देखिन्छ।”
यहुन्ना ३: १—२१
यस बातचीतमा धेरै अवधारणाहरु उत्पन्न भए । सर्वप्रथम , येशूले यस दोस्रो जन्मको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्नुभयो ( ‘ तिमी नयाँ गरी फेरी जन्मनुपर्छ ’) । तर यस जन्ममा कुनै मानवी मध्यस्थहरु छैनन् । पहिलो जन्म , अर्थात ‘शरीरबाट जन्मनु’ र ‘पानीबाट जन्मनु ’मानवी मध्यस्थहरुबाट आउँदछ र मानव नियन्त्रणमा हुन्छ । तर दोस्रो जन्म (द्धिज) मा तीन ईश्वरीय मध्यस्थहरु पर्छन्: परमेश्वर ,मानिसको पुत्र र आत्मा (प्राण) । आउनुहोस् यिनीहरुको बारेमा अझै जानकारी लिऔ ।
येशूले भन्नुभएको छ कि ‘ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ……’ यसको अर्थ हो कि परमेश्वरले सबै मानिसहरुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ ……. प्रत्येकलाई जो यस संसारमा बस्छ ……… यसमा कसैलाई पनि बाहिर राखिएको छैन । हामीले यस प्रेमको विस्तारलाई ध्यान दिन समय खर्च गर्न सक्दछौ , तर येशू चाहानुहुन्छ कि हामीले पहिला यो बुझ्नु पर्छ कि यसको अर्थ हो परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ । परमेश्वरले तपाईलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ , चाहे तपाईको स्थिति , वर्ण , धर्म , भाषा , उमेर लिङग , धन , शिक्षा जे भएता पनि …..अन्यत्र भने अनुसारः
38 हो, म निश्चिन्त छु कि कुनै चीजले पनि हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पार्न सक्तैन न मृत्यु वा जीवनले न स्वर्गदूतहरू वा शासन गर्ने आत्माहरूले न त कुनै वर्तमानका वा भविष्यका कुराले न त कुनै माथिका वा तलका शक्तिले न त सारा संसारको कुनै अरू सिर्जित कुराले हाम्रो परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्नेछ जो हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट
येशूमा छ।रोमी ८: ३८—३९
तपाई ( र मेरो ) लागि परमेश्वरको प्रेम दोस्रो जन्मको आवश्यकतालाई हटाउदैन ( “कोही पनि परमेश्वरको राज्यलाई तबसम्म देख्न सक्दैनन् जबसम्म उनीहरु नयाँ गरी फेरी जन्मदैनन्”) । बरु तपाईको लागि परमेश्वरको प्रेमले उहाँलाई कार्य गर्न प्रेरित गर्‍यो ।
“परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो……..”
हामीलाई दोस्रो इश्वरीय मध्यस्थमा ल्याउदै ………
‘मानिसको पुत्र’ येशू हुनुहुन्छ भनि आफैले स्वंम उल्लेख गर्नुहुन्छ । यो शब्दको अर्थ हो हामी पछि हेर्छौ । यहाँ उहाले भन्दैहुनुहुन्छ कि पुत्रलाई परमेश्वर द्धारा पठाइएको थियो । त्यसपछि उहाँले माथि उठाइनुको बारेमा विशेष कथन दिनुहुन्छ ।
14 “मोशाले मरूभुमिमा सर्पलाई उठाउनु भयो। मानिसको पुत्रसंग पनि त्यस्तै छ। मानिसको पुत्र पनि उचालिनु
यसले हिब्रु वेदमा भएको विवरणलाई संकेत गर्दछ जुन मोशाको समयभन्दा १५०० वर्ष अघि भएको थियो ।
4 ती मानिसहरूले होर पर्वतबाट यात्रा गरी लाल समुद्रमा एदोमको वरिपरि यात्रा गरे। तर मानिसहरू धैर्यहीन भईसकेका थिए।5ती मानिसहरूले परमेश्वर र मोशाको विरोधमा बोले। तिनीहरूले भने, “तिमीले हामीलाई मरूभूमिमा मर्नको निम्ति किन मिश्र देशबाट ल्यायौ? त्यहाँ रोटी छैन! त्यहाँ पानी छैन! र हामी यो दयनीय खानालाई घृणा गर्छौं! ”
6 तब परमप्रभुले तिनीहरूमाथि विषालु सर्पहरू पठाउनु भयो। तिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई मारे। अनि धेरै इस्राएलीहरू मरे।7मानिसहरू मोशा कहाँ आए र भने, “हामीले परमप्रभु र तपाईंको विरोधमा बोलेर पाप गरेका छौं। प्रार्थना गर कि परमप्रभुले सर्पहरूलाई हामीबाट टाढा लानु होस्। ” यसकारण मोशाले मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरे।
8 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नु भयो, “सर्प बनाऊ र खम्बामा राख। जोले डसेको छ उसले यसलाई हेरेर बाँच्न सक्छ। ”9यसकारण मोशाले एउटा काँसाको सर्प बनाए र त्यसलाई खम्बामा राखे। जब कुनै व्यक्तिलाई सर्पले टोके उसले काँसाको सर्पलाई हेरे र तिनीहरू
यो कथा प्रयोग गरेर येशुले ईश्वरीय मध्यस्थको रुपमा आफ्नो भुमिकाको वर्णन गर्नुभयो । सोच्नुहोस् कि साँपहरुले टोकेका मनिसहरुलाई के भएको होला ।
जब एक विषालु साँपले टोकेपछि शरीरमा विषको प्रवेश हुन्छ । सामान्य उपचार भनेको विषलाई चुसेर बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नु हो ; टोकिएको अंगलाई कडासँग बाँध्नुहोस् ताकि रगत प्रवाह नहोस् र विष नफैलियोस् ; र गतिविधिहरु कम गर्नुहोस् ताकि कम हृदय गतिले शरीरमा विषलाई छिटो नफैल्याओस् ।
जब साँपहरुले इस्राएलीहरुलाई संक्रमित गरे उनीहरुलाई निको हुनका लागि खम्बामा राखिएको पित्तलको साँपलाई हेर्नुपर्छ भनियो । तपाईले यसको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि एक व्यक्ति आफ्नो ओछ्यानबाट पल्टदै नजिकैको उठाएको पीतलको साँपलाई हेर्दैछ र निको हुदैछ । तर इस्राएली शिविरमा करीव ३० लाख मानिसहरु थिए ( तिनीहरु मध्ये सैन्य उमेर योग्यका गन्ती ६००००० भन्दा बढि मानिसहरुको थियो ) — एउटा ठुलो आधुनिक शहरको आकार जत्रो थियो । संभावना धेरै थियो कि ती काटिएका मानिसहरु धेरै किलोमिटर टाढा थिए र पित्तल वाला साँपको खम्बाबाट टाढा थिए । त्यसैले साँपले टोकेकाहरुले छनौट गर्नुपर्ने थियो । तिनीहरुले घाउँलाई कडा बाधेर र रगतको प्रवाहलाई रोक्न र विषलाई फैलिनबाट रोक्नको लागि मानक सावधानी को उपयोग गर्न सक्थे । वा तिनीहरुले मोशाले घोषणा गरेको उपचारमा विश्वास गर्नुपर्ने थियो र रगतको प्रवाह र विषको फैलावटलाई बढाँउदै त्यो खम्बामा रहेको पित्तलको साँपलाई हेर्नको लागि धेरै किलोमिटर टाढा सम्म पैदल हिड्नुपर्ने थियो । यहाँ मोशाको शब्दमा विश्वास वा विश्वासको कमि हो जो प्रत्येक ब्यक्तिको कार्यको मार्ग निर्धारण गर्दछ ।
येशूले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ क्रुसमा उच्च उठाईएकोले उहाँले पाप र मृत्यृको बन्धनबाट स्वतन्त्र पार्ने सार्मथ्य पाउँनुहुन्छ । जसरी पित्तलको साँपले इस्राएलीहरुलाई विषाक्त मृत्युको शक्तिबाट छुटकारा दियो । यद्यपि , जसरी इस्राएलीहरुलाई पित्तलको साँपको उपचारमा भरोसा राख्न र खम्बामा हेर्न आवश्यकता थियो हामीले पनि येशूलाई विश्वास वा विश्वासको आँखाले हेर्न आवश्यक छ । यसको लागि तेस्रो इश्वरीय मध्यस्थले काम गर्न आवश्यक छ ।
आत्माको बारेमा येशूको भनाइलाई विचार गर्नुहोस्
बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ, त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ।
‘हावा’ को लागि जुन ग्रीक शब्द ( न्युमा ) को उपयोग गरिएको छ त्यहि ‘आत्मा’ को लागि गरिएको छ । परमेश्वरको आत्मा हावा जस्तै हो । कुनै पनि मानिसले हावा प्रत्यक्ष रुपमा देखेको छैन । तपाई यसलाई देख्न सक्नुहुन्न । तर हावा हाम्रो वरिपरि जताजतै छ । हावा अवलोकनीय छ । तपाई चीजहरुमा यसको प्रभाव मार्फत यसलाई अवलोकन गर्नुहुन्छ । जसरी हावा चल्छ यसले पातहरु सरसराउँछ , कपाल हलिन्छ , झण्डा फरफराउँछ , चिजहरु हलचल गर्दछन् । तपाई हावालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न र यसलाई निर्देशित गर्न सक्नुहुन्न । हावा जहाँ चाहान्छ त्यही बहन्छ । तर हामीले डुंगाका पालहरुलाई उठाउँन सक्छौ ताकि हावाको ऊर्जाले हाम्रा डुंगाहरुलाई दिशा दिन सकोस् । माथि उठेको र बाधिएको पालले हामीलाई ऊर्जा दिन र अगाडी बढ्न हावालाई अनुमति दिन्छ । यो उठेको पाल बिना हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको हावाको ऊर्जाले हामीलाई कुनै फाईदा गर्दैन ।
आत्माको सन्र्दभमा पनि यो त्यस्तै हो । हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर आत्मा जहाँ चाहान्छ त्यही जान्छ । जब आत्मा चल्छ तपाई आफै स्वमंलाई प्रभावित गर्नको लागि अनुमति दिन सक्नुहुन्छ , यसको जीवन शक्ति तपाईमा ल्याउन , तपाईलाई अगाडी बढाउन । यो मानिसको पुत्र हो , क्रुसमा चढाइएको , जो उठाइएको पित्तलको साँप हो वा हावामा उठेको पाल हो । जब हामी क्रुसमा चढेको मानिसको पुत्रमा विश्वास राख्छौ यसले आत्माको हामीलाई जिवन प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ । तब हामी फेरी जन्मन्छौ — यो दोस्रो पटक आत्माबाट । तब हामी आत्मा—प्राणको जीवन प्राप्त गर्छौ । आत्माको प्राणले हामीलाई हाम्रो भित्र देखि द्धिज हुन शक्षम गर्दछ , केवल बाहिरी प्रतीकको रुपमा मात्र उपनयन जस्तो होइन ।
यसलाई सँगै संक्षेपमा यहुन्नाको सुसमाचारमा यसरी ल्याइएको छः
12 केही मानिसहरूले मात्र उहाँलाई स्वीकार गरे। ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे उनीहरूलाई मात्र परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार उहाँले दिनुभयो।
13 ती बालकहरू प्राकृतिक तवरबाट जन्मेका थिएनन्। तिनीहरू आफ्नो आमा-बाबुको शारीरिक इच्छा अथवा निर्णयबाट जन्मेका थिएनन्। बद्लामा तिनीहरू परमेश्वरबाट जन्मेका
बच्चा बन्नको लागि एउटा जन्मको आवश्यक हुन्छ , त्यस्तै ‘परमेश्वरको सन्तान ’ बन्न दोस्रो जन्म — द्धिजको वर्णन गर्दछ ।
द्धिजलाई विभिन्न अनुष्ठानहरु जस्तै उपनयनको माध्यमबाट संकेत गर्न सकिन्छ तर साचो आन्तरिक दास्रो जन्म ‘मानव निर्णय’ द्धारा व्यवस्था गरिदैन । एउटा असल अनुष्ठान , जन्मको वर्णन गर्न सक्छ , हामीलाई यस जन्मको आवश्यकताको स्मरण गराउन सक्छ तर यसलाई ल्याउन सक्दैन । यो केवल इश्वरको आन्तरिक कार्य हो जब हामी ‘उहाँलाई ग्रहण गर्छौ’ र ‘उहाँको नाममा विश्वास गर्दर्छौ’ ।
प्रकाश र अन्धकार
पानी जहाजको भौतिकशास्त्र बुझ्नुभन्दा धेरै अघि, मानिसहरुले पालहरु प्रयोग गरेर हावाको शक्तिलाई उपयोग गरिरहेका छन् । यस्तै गरि हामी दोस्रो जन्मको लागि आत्माको उपयोग गर्न सक्छौ , चाहे हामीले यसलाई पुर्ण रुपमा नबुझेको भएता पनि । यो समझको अभाव होइन जो हामीलाई बाधा उत्पन्न गर्छ । येशूले शिक्षा दिनुहुन्छ कि यो हाम्रो अन्धकार प्रतिको प्रेम ( हाम्रा दुष्कर्महरु ) हुन सक्छ जसले हामीलाई सत्यको ज्योतिमा आउनदेखि रोक्छ ।
19 मानिसहरूको न्याय यही आधारमा गरिन्छः संसारमा ज्योति आएकोछ, तर मानिसहरूले ज्योतिको बद्लीमा अन्धकार मन पराए। किन? किनभने तिनीहरूले दुष्ट कामहरू गरिरहेका
यो हाम्रो बौद्धिक समझ भन्दा हाम्रो नैतिक प्रतिक्रिया हो जसले हामीलाई दोस्रो जन्म बुझ्नबाट रोक्दछ । बरु हामीलाई ज्योतिमा आउन सल्लाह दिइएको छ ।
21 तर त्यो जसले सत्यको बाटो पहिल्याएर अनि ज्योति तर्फ आउँदछ यसर्थ यो देखाइने छ कि उसको काम परमेश्वर मार्फत गरिएको हो।
हामी हेर्छौ कि उहाँको दृष्टान्तले हामीलाई ज्योतिमा आउने बारेमा अझ कसरी सिकाउँदछ ।
ईश्वरको आत्मा, जेसस र निकोडेमस, जॉन, तपाईं नयाँ गरी जन्मनुपर्दछ।, दोस्रो जन्म, द्विज, नयाँ जन्म, पवित्र आत्मा, प्राण